जसलाई दैवले ठग्यो तर जसले सारा संसारलाई संघर्षमा बाँच्न सिकाए (भिडियो)
काठमाडौं, कुनै एउटा स्वस्थ मानिसको हातखुट्टाले राम्रो गर्छ । तर, तपाईंले तीन कुरामा स्पष्ट हुनु हुन्न भने अपांग सरह नै हो । पहिलो कुरा तपाई को हो, तपाईंको मूल्य मान्यता के हो ?, दोस्रो तपाईंको प्रमुख उद्देश्य के हो ? र तपाईले उद्देश्य प्राप्त कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
हातखुटा नहुँदा तपाईंले आफ्नो दैनिकी कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? तपाईंले कल्पना गर्नु भएको छ । यदी यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने धेरै मानिस हतास हुन सक्छन् । तर, मानिसमा आत्मबल, साहस र लगनशीलता भयो भने जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मानिसले आफूलाई सफल र सक्षम रहेको प्रमाणित गर्न सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण ‘निक भुइचिज’ हुन् ।
निक यस्ता व्यक्तिव हुन् जसले आफुले आफूलाई कठिन परिस्थितिबाट पूर्ण रुपमा बाहिर निकालेर अरु सब्लाङ व्यक्तिभन्दा आफूलाई अब्बल सावित गरे । उनी ४ डिसेम्बेर १९८२ मा अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा जन्मिएका थिए । टेत्रा एमिलिया सिनड्रोम नामक रोगको कारण आमाको गर्भमै भएको अवस्थामा उनको हात तथा खुट्टाको विकास हुन सकेन । उनले जन्मेदेखि नै शारीरिक रुपमा संघर्ष शुरु गर्नु त पर्यो, स्कुलमाउनको शारीरिक अवस्था हेरेर अन्य विद्यार्थीले खिल्ली उडाउने गर्थे । यस कारणले उनलाई पटक–पटक मानसिक तथा भावनात्मक रुपमा निकै कमजोर बनाएको थियो ।
स्कुलमा निकको कुनै पनि मिल्ने साथी भएनन् । एक्लोपन र निराशाका कारण निक मानसिक रुपमा निकै कमजोर बन्न पुगे । जस्ले गर्दा १० वर्षको उमेरमै उनले आत्महत्या गर्ने कोसिस गरे । सानै उमेरमा संसारको सबै प्रकारको दुःख भोगिसकेका निकलाई आमाबाबु र दाजुबहिनीको मायाले हिम्मत हार्न दिएन र आत्माहत्या गर्नबाट रोक्न सफल भयो । निक अन्य बच्चाहरुको तुलनामा निकै फरक थिए, उनी आफ्नो जिन्दगी जिउनको लागि चाहिने उद्देश्यको खोजी गर्ने गर्थेे । त्यसपछि उनले आफू तथा भगवानप्रति विश्वास गर्न शुरु गर्न थाले भने त्यसपछि उनले आफ्नो जिन्दगीलाई नयाँ सोच तथा दिशातर्फ मोड्न कमजोरीलाई नै सोच बनाए । त्यसपछि उनले १७ वर्षको उमेरमा लाइफ वीथआउट लिमबस भन्ने संस्था खोले ।
त्यसदिन पछि उनले कहिले पनि पछाडि फर्किेर हेर्नु परेन । निक संसारका उत्कृष्ट प्रेरणदायी वाचकध्ये एक हुन, उनको जिन्दगीलाई हेर्ने तथा बुझ्ने दृष्टिकोण तथा क्षमताले आम मानिसले जिन्दगीमा गहिरो असर पारेको छ । १९ वर्षको कलिलो उमेरमा उनीद्वारा गरिएको पहिलो प्रेरणदायी वाचन शुरू गरेका थिए । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरी प्रेरणदायी वाचन दिन सफल भएका छन् ।
कुनै पनि स्वस्थ मानिसले निकले पौडी खेलेको देख्यो भने पनि लाजले भुतुक्क हुने गर्छ । उनी कुशल पौडीवाजको साथै एक कुशल लेखक, संगीतकार तथा पेन्टर पनि हुन् । यसको साथै उनी फुटबल र स्काई डाईभिङ पनि गर्छन् । निक जब ८ वर्षको हुँदा आफ्नो अपांगताका कारण आफ्नो विवाह पनि नहुने र केही काम गर्न पनि नसक्ने भन्दै आफ्नो जीवनबाट निराश भएका थिए । कालान्तरमा उनले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याए । उनले सोचे मैले आफ्नो पत्नीको हात समात्न नसके पनि उनको मन समात्न सक्छु, त्यसका लागि मलाई हातको आवश्कतापर्ने छैन । यही उत्प्रेरणाले उनको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो । अहिले उनी विवाहित मात्र होइन दुई बच्चाका पिता पनि हुन् ।
निक बेला–बेलामा भने गर्छन्–‘आफूलाई विश्वास गर्नुस्, आफूमा भरोसा राख्नुहोस्, यी दुई कुरा गुमाउनु भयो भने हातखुट्टा गुमाउनु बराबर हो । जीवनबाट पाउने कुरालाई खुल्ला मनले स्वीकार गर्नुस्, त्यो किन अप्ठारो नै किन नहोस् किनकि अप्ठ्यारो नै त्यस्तो खुड्किला हुन जसमा चढेर नै सफल हाम्रो जीवनमा सफलता तथा खुशी पाउने गर्दछ । म तपाईहरुलाई यस कुरालाई स्वीकार गर्नको लागि प्रेरणामात्र दिन सक्छु । यद्यपि, कुनै स्पष्ट बाटो नदेखिन पनि सक्छ । तर, त्यसको अर्थ कुनै पनि बाटो छँदै छैन भन्ने होइन । जस्तो सुकै समस्याको पनि समाधान हुन्छ नै तर आफूमा भरोसा तथा विश्वास हुनुपर्छ ।’
पादका ७ रोचक तथ्यहरु: जुन सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुहुनेछ !
शास्त्र भन्छ ‘नगर्नुस् यी काम, कंगाल भइन्छ